N ingbo Rykay Electric Co., Ltd. into speacialized ukuvelisa encinane efrijini & imoto liphole & ibhokisi ezifudumeleyo, ice uMenzi, ibhiya kupholile, njalo njalo Kufuneka amava iminyaka engaphezu kwama-16 kweli candelo.
W e baye bakha ubudlelwane intsebenziswano eyomeleleyo elide kunye nezilishumi omkhulu beenkampani phakathi kweli shishini phesheya. Ngoko nangoko kunye nengcali inkonzo emva-kwentengiso ezinikwa iqela lethu umcebisi uye onwabe abathengi bethu. Oluneenkcukacha Info kunye parameters ukusuka urhwebo mhlawumbi kuthunyelwa kuwe nayiphi ngokucokisekileyo bavume. Iisampuli Free bakhululwe kunye nenkampani khangela ukuba corporation yethu.
O mali uze kubathabathela imilo kunye nophuhliso oluzinzileyo kunye nokupholisa zombane ngoovulindlela spirits.Our RYKAY uhlobo kunye neyunithi zokufudumeza kunye iifriji imoto zenziwe ngezinto ezintle, ubugcisa, uyilo nomtsalane, oluzinzileyo nomgangatho ethembekileyo inkampani ur, lt isebenzisa AC / DC ukuba amandla ubonelelo kwaye kulula ukwenza. Ezi mveliso ethandwayo kuthengiswa eJapan. South Korea, USA, UK, Australia, njl izinto zethu yamkelwa ngabathengi.
inkampani yethu ukwamkela abaxumi ezindala entsha intsebenziswano ishishini.